छक्का पन्जा ३ को पछि उमेर ढल्किन्छ करोड क्लबमा, फिल्म चाहिँ युट्युबमा कहिले ? - www.dthreeonline.com
छक्का पन्जा ३ को पछि उमेर ढल्किन्छ करोड क्लबमा, फिल्म चाहिँ युट्युबमा कहिले ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २३, २०७६ समय: ९:३३:३५
ईटहरी/ नेपाली भिडियोहरु युट्युबमा आएपछि यसको भ्युज गन्ती सुरु हुन्छ । भिडियोको स्तरियता, त्यहा फिचर्ड भएका कलाकार तथा स्वर भरिएका गायकको लोकप्रियताका कारण भ्युजको तलमाथि हुने गर्छ । यता फिल्मका गीतहरूले त छोटो समयमै भ्युजमा फड्को मार्ने गरेको छ । यसैले पनि करोड भ्युजलाई महत्त्वपूर्ण तवरले हेर्ने गरिन्छ । अहिले छक्का पन्जा ३ को ‘पछि उमेर ढल्किन्छ’ बोलको गीतको भिडियो करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ । हेर्नुस भिडियो ।
सार्बजनिक गीत तथा भिडियोलाई २०१८ को सेप्टेम्बर ९ मा हाईलाईट नेपाल युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरिएको थियो । सार्बजनिक गरिएको १० महिनामा भिडियो करोड क्लबमा प्रबेश गरेको हो । सो गीतको भिडियोमा मुख्य रुपमा अभिनेता तथा निर्माता दिपक राज गिरि र नायिका दिपिका प्रसाईं फिचर्ड छन् ।
निशान भट्टराई र एन्जिला रेग्मीको आवाज रहेको रोमान्टिक गीतमा अर्जुन पोख्रेल र दिपक राज गिरिले संयुक्त रुपमा शब्द संकलन गरेका छन । गीतमा महाराज थापाको एरेन्ज र अर्जुन पोख्रेलको संगीत रहेको छ भने भिडियोलाई ४२ हजार बढी लाईक र ४६ सय बढी डिसलाईक आएको छ । ३ हजार ७ सय बढिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
फिल्मलाई दिपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी हुन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफीमा तयार भएको यो भिडियोलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन् । विपिन मल्लको सम्पादन रहेको यो चलचित्रमा दिपकराज गिरी, दीपिका प्रसाई, प्रियंका कार्की, केदार प्रसाद घिमिरे, जितु नेपाल, निर शाह, शिवहरि पौडेल, किरण केसी, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रको पहिलो गीत ‘पहिलो नम्बरमा’ले यसअघि नै सार्वजनिक भएको छोटो समय अर्थात ३७ दिनमै १ करोड भन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको थियो भने अहिले ४ करोड भ्युजको नजिकमा पुगेको छ ।